प्रचण्डसँग किन टाढिए पूर्वमाओवादीकै नेताहरु?
वीरेन्द्र ओली शुक्रबार, साउन १६, २०७७, १०:५५
काठमाडौं- नेकपाको गत मंगलबार स्थायी कमिटी बैठक स्थगितपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह बैठक चलाउने पक्षमा पुगे। नेपाल पक्षबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत १४ जना स्थायी कमिटी सदस्य बैठकमा सभागी भए। तर, प्रचण्ड पक्षका भनिएका चार जना नेताले सहभागिता नै जनाएनन्।
सचिवालयमा रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा भएपनि थापा बैठकमा गएनन्। मन्त्रालयकै काममा व्यस्त भएको भन्दै थापा पक्ष विपक्षमा शक्ति देखाउने बालुवाटार बैठकमा अनुपस्थित भएकाे बताइन्छ।
नेकपाकाे स्थायी कमिटीमा प्रचण्डसहित १९ जना सदस्य भए पनि अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बनेपछि १८ जना छन्। जसमा चार जना बैठकमा अनुपस्थित भए। अनुपस्थित हुनेमा सचिवालयबाट थापासहित स्थायी कमिटीका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापा थिए। बैठकमा बहुमत पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यता भएपछि प्रचण्ड आफैंले फोन गरेर बैठकमा सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेका थिए। प्रचण्ड निकट नेताले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो कित्ता क्लियर गर्न पूर्वमाओवादी समूहका नेतालाई फोन गरेका थिए। तर, बिहान ११ बजेदेखि सुरु गर्ने भनिएको बैठक बहुमत पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै डेढ घण्टा ढिला गरी साढे १२ बजे सुरु भयाे। बैठकमा २९ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरु उपस्थित भए। तर, चार नेता आउन भ्याएनन्।
भट्टले प्रचण्डकाे साथ छोडेको आकलन
अध्यक्ष प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै चित्त दुखाई स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले साथ छोडेकोमा भएको छ। अरु नेताले बीचमा प्रचण्डलाई साथ दिने छोड्ने गरे पनि भट्टले लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका थिए।
प्रचण्डको चित्त दुखाई भट्टप्रति कतिसम्म थियो भन्ने बुझ्न गत साउन ११ मा पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं सुदूरपश्चिमका सह–इन्चार्ज खगराज भट्टको संयोजकत्वमा गएका नेताहरुलाई आफूले कयौंपल्ट सम्पर्क गर्न खोज्दासमेत सम्पर्कमा नआएको भनि गरेकाे गुनासाेबाटै थाहा लाग्छ। आफूले मन्त्री बनाउनेदेखि स्थायी कमिटीमा समेत ल्याएकाे भन्दै प्रचण्डले सल्लाह नै नगरी छोडेको भन्दै आक्राेश पाेखेका थिए। पार्टीमा असन्तुष्टि भए पनि बहस छलफल नै नगरी गएको भन्दै प्रचण्डले गुनासो गरेको भेलामा सहभागी केन्द्रीय सदस्य खगराज भट्टले जानकारी दिए।
लेखराजले प्रचण्ड क्याम्प छोडेर गइसकेको माओवादी समूहका नेताहरु बताउँछन्। उनले प्रचण्ड क्याम्प छोड्नुमा सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय राजनीति प्रमुख मानिएकाे छ। प्रचण्डले सुदूरपश्चिमकै एक कार्यक्रममा अब सुदूरपश्चिमको नेता भीम रावल भएको अभिव्यक्ति दिएपछि लेखराज भट्किएको प्रचण्ड निकट नेताले बताए। सुदूरपश्चिममा रावललाई इन्चार्ज दिनु र प्रचण्डले बोलेको मिल्न जानु लेखराज बिच्कनुको मुख्य कारण हुन पुगेको छ।
यसअघि एमाले हुँदा सुदूरपश्चिममा को नेता हुने? भन्ने विषयमा भीम रावल र कर्ण थापाको लामै जुहारी भयो। फेरि एमाले माओवादी एकता भएपछि लेखराज भट्ट र भीम रावलको जुहारी चल्न थालेको छ। प्रचण्डले रावललाई अतिरिक्त माया देखाउँन खोज्दा भट्ट भड्किएका छन्। प्रचण्ड निकट भएर सबैभन्दा माया र अवसर पाउँनेमा लेखराज भएकाले अन्तै कतै जान नसक्ने खगराजको तर्क छ।
लेखराज अहिलेको कार्यकालसहित चार पटक मन्त्री भइसकेका छन्। पार्टीमा वैचारिक बहस छलफलमा यताउता हुनु स्वभाविकै भएकोले अन्तिम अवस्थामा पूर्वमाओवादी एक हुने उनको बुझाई छ।
त्यसो त, प्रचण्डलाई भेट्न खोज्दा सजिलै भेट्न नसकिने र अवसरमा पनि 'बी' र 'सी' क्लासका माओवादी बनाइएको कतिपय नेताको गुनासो छ। उनीहरु खुमलटारमा अग्लो पर्खाल बनाइएको व्यंग्य गर्छन्। आफूहरुको टाउको देखाएर प्रचण्डले आफ्नो भविष्य मात्रै सुनिश्चित गर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन्। नेताहरुलाई समान माया र अवसर दिनुपर्ने उनीको भनाई छ।
थापालाई लिएर ओली प्रचण्ड दुवै पक्ष कन्फ्युज
पार्टी सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ कुन कित्तामा छन् भन्ने विषय रहस्यमै छ। गत मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा बादल उपस्थित नभएपछि ओली गुटलाई थप विश्वास बढेको छ भने प्रचण्ड गुटलाई थप अविश्वास बढेको छ। तर, प्रचण्ड गुटले बादल आफ्नो टिममा भएको दाबी गर्छन् भने ओली गुटका नेताहरुले आफ्नाे टिमका बादल भएको भन्ने गरेका छन्।
अझै ओली प्रचण्ड दुवै गुट बादलसँग बलियो गरी भर पर्न सकेका छैनन्। बादल ओली समूहको महत्त्वपूर्ण गुटका भेलामा सहभागी हुँदै आएका छन्। उता प्रचण्डले बोलाएका एकाध भेलाबाहेक सबैमा सहभागी हुँदै आएका छन्।
बादल ओली निकट देखिनु सत्तामा बसेर अवसर लिनेभन्दा पार्टी विभाजन हुँदा परिवर्तनका मुद्दाहरु लथालिङ हुन्छन् भन्ने परेको हुन सक्ने केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले बताए। ‘बाहिर सकेसम्म बादल बोल्नु हुन्न। कतिपयले बादल के गर्दैछन् भन्ने भेउ पाउँदैनन्,’ आचार्यले भने, ‘अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्रै कुन कित्ता हुने भन्ने खुलेपछि बल्ल थाहा हुन्छ।’
यसअघि २०६९ मा एमाओवादी विभाजन हुँदा बादल प्रचण्डसँग अन्तिम समयसम्म थिए। तर, पार्टी विभाजन भएपछि मात्रै प्रचण्डलाई छोडेर मोहन वैद्य ‘किरण’ तिर गएका थिए। वैद्यलाई चार वर्षमै छोडेर बादल प्रचण्डलाई साथ दिन आइ पुगे।
रायमाझी र थापालाई प्रचण्डको गोप्य भेलामा बोलाउनै छाडियो
स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी लामो समय तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिँदै आए। २०७२ साल असोज ९ गते माओवादी छोडेको पत्रकार सम्मेलन गर्नु केही घण्टा अघिसम्म रायमाझी भट्टराईसँगै थिए। अन्तिममा भट्टराईको साथबाट कुनै पार नलाग्ने देखेपछि रायमाझी माओवादीमै बसे।
माओवादीमा बसे पनि रायमाझीलाई प्रचण्डबाट पाउनुपर्ने अतिरिक्त माया र अवसर पाइएन भन्ने दुखेसो हुन सक्ने प्रचण्ड निकट नेताले बताए। रायमाझी प्रचण्डबाट थाेरै किनारामा पारिएको मौका छोपेर ओलीले नजिक्याएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। ओलीले रायमाझीलाई मन्त्री पदको ललिपप देखाएकाले खुमलटारभन्दा बालुवाटार नजिक देखिएको हुन सक्ने आंकलन गरिएको हाे। दुई अध्यक्षको विवादमा किन देखिनु भनेर कित्ता किलियर नगरेको समेत हुन सक्ने अर्का पक्षका नेताहरुको बुझाई छ।
यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा प्रचण्डभन्दा ओलीतिर नजिकिएका छन्। प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा पठाउने आस्वासन दिएपनि अन्तिममा धोका दिएको भन्दै थापा चिढिएका छन्। पार्टीमा सिनियर नेता भएपनि आफूलाई प्रचण्डले अवसर नदिएको उनको गुनासो छ।
थापालाई ओलीले अन्य राजनीतिक लाभ दिन फकाउने गरेको प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए। रायमाझी र थापा ओलीतिर नजिकिए पनि अन्तिम अवस्थामा प्रचण्ड पक्षमै हुने केही नेताको दावी छ। तर, पछिल्लो समय प्रचण्डले बोलाउने अति गोप्य भेलामा भने रायमाझी र थापा दुवैलाई बोलाउन छाडिएको छ। तर, थापाले आफू अध्यक्ष ओली र प्रचण्डकाे पक्षभन्दा एकताको पक्षमा उभिएको बताए। ‘अहिलेको आवश्यकता पार्टी एकता हो। पार्टीलाई फुट विभाजनबाट जोगाउँनु पर्छ,’ थापाले नेपाल लाइभसँग भने, ‘म मात्रै होइन अरु थुप्रै नेता साथीहरु बीच धारमा बसेर एकताको पक्षमा उभिनु भएको छ।’
थापाले माओवादीको २०६२ सालमा भएको चुनवाङ बैठकमा पार्टी संशोधनको भासमा जान थालेको भन्दै बैठक बहिस्कार गरेका थिए। पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत भएका थापाले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनु गलत भएको भन्दै छुट्टै पार्टी चलाएका थिए। ०७३ सालमा सबै माओवादी धारा एक हुने एकता चलेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा उनी सहभागी भए।
रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टाेपबहादुर रायमाझी र मणि थापा गरी चार नेता मात्रै नभई स्थायी कमिटी सदस्य हरिबाेल गजुरेल र देवेन्द्र पाैडेललाई पनि प्रचण्डले आफूबाट टाढा भएकाे महसुस गर्न थालेका छन्।